Inzala ephantsi USDA Yokulima ii-Microloans kuma-Veterans ase-US
AmaMerika afuna abaFimi, abaPhezulu bafuna iMisebenzi, ngoko ...
Ngombulelo kuzo zonke iindawo, iBill Bill, i-US veterans izakufumana kulula ukufumana ama-Microloans anomdla ongezantsi ukubanceda ukuqala nokugcina iifama ezincinci kunye namafama.
I-United States isebenza kumafama, kunye nenani elikhulayo labadala bezilwanyana abafuna imisebenzi, ukufama kweprogram ye-Microloan yabalindi be-Agesi, elawulwa yi-Arhente yeNkonzo yeFama (FSA) yeSebe lezoLimo lase-US, inceda ekusebenzeni zombini iimfuno.
Okokuqala, uMthetho oYilwayo weFama ka-2014 ukhulula ngokukhethekileyo i-USDA iMeter Farmer Microloans ukusuka kwimimiselo yokubuyisela emiselweyo efunwa yiyonke i-USDA Imali eSebenzayo yokuSebenza.
Ukongezelela, le nkqubo inikezela ukufikelela kwi-credit and flexibility accessory, kwaye isebenza njengendlela ekhethekileyo yokubolekwa kwemali yemisebenzi encinci yokulima njengabavelisi bezityalo ezikhethekileyo.
Abafaki zicelo be-Microloan abafanelekayo bangababoleka ukuya kwii-35,000 zamawaka, kunye nemigqaliselo yokubuyisela engayi kudlula iminyaka engama-7. Iimali-mboleko ezongezelelweyo zifumaneke ukuhlawula iindleko zokusebenza zonyaka kwaye zibuyiselwa kwiinyanga ezili-12 okanye xa iimveliso zezolimo ziveliswa.
Ngaphantsi kweYilwayo yeFama, amazinga omdla kwabaqhubi bezilwanyana ze-Microloans anqamle kwi-5% okanye inani lamanani lamanje lemali ye-USDA yemigaqo-nkqubo yokuSebenza ngokuthe ngqo, nayiphi na encinane. Ngomhla kaFebruwari 2015, inani lesithakazelo se-USDA Lolawulo oluSebenzayo oluPhezulu lwalu-2.625%.
I-USDA ibuye yabona ukuba ii-Microloans kubalindi bee-veterans ziya kuba nenkqubo yokwenza isicelo esilula kunye neemfuneko ezingqongqo malunga namava olawulo lwamafama.
Akukho Uluvo Lwezolimo?
Ngokutsho kwe-USDA, abalawuli beprogram ye-Microloan bayaqonda ukuba amaninzi amabutho omkhosi afaka isicelo semali-mboleko ayinakufumana "amava asekuhlaleni asemafama" okanye angakhange aphakanyiswe kwifama okanye ahlale ehlala kwindawo yokulima.
Kwakhona Khangela: IWebhusayithi entsha inceda ama-Veterans ase-US afune imisebenzi kwizoLimo
Ukuze bahlale kuzo, i-FSA ithi iya kuqwalasela amava omdala kwishishini elincinci okanye nasiphi na inkqubo yokufunda ngokuzimeleyo njengendlela yokuhlangabezana neemfuno zolawulo lwefama. Oku kuya kunceda abafakizicelo abaye banciphisa izakhono zasefama ngokubanika ithuba lokufumana amava olawulo lwamafama ngelixa besebenza nomcebisi ngexesha lokuqala lokuvelisa nokuthengisa, "kuchaza iFSA.
Oko i-microloans ingasetyenziselwa
Abadlali be-veterans abanokusetyenziswa banokusebenzisa ii-Microloans ukuba:
Iindleko zokuqala zokuqala;
Iindleko zonyaka ezifana nembewu, isichumisi, izibonelelo, umvuzo wemhlaba;
Iindleko zokuthengisa nokuhambisa;
Iindleko zokuhlala kwintsapho;
Ukuthengwa kwemfuyo, izixhobo kunye nezinye izinto ezibalulekileyo;
Ukuphuculwa kweefama ezincinci ezifana nemithombo kunye nezipholizi;
Izindlu zeHoop ukunyusa ixesha lokukhula;
Ukufaneleka: Yintoni 'uMfama wezilwanyana?'
Ngaphantsi kwe-Bill Bill yase-2014, "abalimi bezilwanyana" ekugqibeleni baqatshelwa njengeklasi ekhethekileyo kunye neyehlukile kwiinjongo ze-USDA ukufaneleka kwemboleko. Ngaphandle kwemfuno yenkonzo yempi, inkcazo yeFama yeFama iFundist efanayo ifana ne-USDA yexesha elide lokulima abalimi kunye nabaxhasi.
Ngokutsho kwe-USDA, "ukuqala abalimi kunye nabaqhankqalazi," bachazwa njengabantu abangazange basebenze ipulazi okanye i-ranch, okanye ngubani osebenze ipulazi okanye i-ranch ngokungabi ngaphezu kweminyaka eyi-10 elandelanayo.
Ngoko, amaMicroloans for veterans atholakale kubantu abaye bakhonza kwiiNkonzo zeZixhobo-kwaye-abazange basebenze ipulazi okanye i-ranch, okanye baye basebenzisa ipulazi okanye i-ranch ngokungabi ngaphezu kweminyaka eyi-10.
Indlela yokufaka isicelo se-Microloan
Iimvume zezilwanyana ezifanelekileyo ziyakulanda i-USDA Microloan kwisicelo kwiwebhusayithi ye-USDA okanye ukhethe enye kwiofisi yesevisi yeeFama yoLawulo lweeNkonzo zeFama.
Abafake izicelo abaneengxaki zokuqokelela ulwazi okanye ukuzalisa ifom yesicelo kufuneka baqhagamshelane neofisi yabo yoLawulo lweNkonzo yeFama.
Emva kokugqiba iphepha elifunekayo, abafake izicelo mabafake isicelo sokubolekisa imali yefama kwiofisi yoLawulo lweeNkonzo zaseFama.
SpeechNow.org v. IKhomishoni yoKhetho loLawulo
IiNkokheli zeMali zoNyaka zeMidlalo zoTyelelo
IsiKhululo seMoto esifunda
Umlenze ukhangela abaDansi beBallet
Ziyintoni na zonke iiNgqamlezo zoBalo?
Ixesha leMculo leBaroque
Iingcebiso zokunquma i-Clutter ekubhaliseni
Yintoni Imfundo Ephakamileyo?
Iimpawu eziqhelekileyo zemithi yaseMntla eMelika
IiNkcubeko zaseJapan kunye ne-Mukashi Banashi
Umlinganiselo wexesha le-NAACP 1905-2008
Okuthethwa YiBhayibhile Ngendlela Yokuziphatha KaThixo